Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ebheke olwandle, umfula i-Trois-Pistoles. - I-Airbnb
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ebheke olwandle, umfula i-Trois-Pistoles.
Rivière-Trois-Pistoles, Quebec, i-Canada
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Simon
U-Simon Ungumbungazi ovelele
(Citq 302783). Indlu eluhlaza okwesibhakabhaka iyi-chalet yesizini engu-4 ehlanganisa konke ene-mezzanine, indawo yomlilo, ukubuka okumangalisayo komfula, umkhathizwe kanye nokushona kwelanga okujwayelekile kwesifunda sase-Bas-Saint-Laurent. I-chalet ephakeme, ebhekene ne-Île aux Basques, ezungezwe izimanga, zivumele unyakaziswe kusigqi samagagasi angaphansi kwezinyawo zakho. Umjaho wezinyoni zasolwandle nezingoma zazo ziphawula isikhathi. Igceke elincane eliseduze ukuze uphumule. Ugxile edolobheni laseTrois-Pistoles nasezindaweni ezikhangayo zabavakashi basendaweni yaseBasques.
I-chalet enethezekile enendawo yomlilo, ifriji, ihhavini, ama-hotplates, umshini wokuwasha izitsha, igumbi elingaphansi eliqandisiwe, i-microwave, i-washer-dryer, ukugeza okuhlukile kanye neshawa, izindlu zangasese ezi-2, ukukhanya okuningi, konke kusezinkuni zikaphayini. I-inthanethi enesivinini esikhulu, i-TV yesikrini esikhulu, ukufudumeza kufakiwe. Ilungele imindeni yabangu-4. Amathuba abantu abangu-6 uma umbhede usofa usetshenziswa phansi. Amakamelo amabili okulala abheke emfuleni, ahlukene futhi avalwa ngezicabha ezishelelayo. Ilungele amaciko aphefumulelwe afuna ukudala umongo omuhle, ekukhanyeni okuphelele. Ukufunda, ukubhala nokucabanga, noma i-pied-à-terre ekahle yohambo ezifundeni zase-Bas-Saint-Laurent naseKamouraska, kanye nazo zonke izigodi ezincane ongazivakashela.
4.95 · 66 okushiwo abanye
I-Trois-Pistoles yindawo ephilayo. Kukhona Le Caveau microbrewery nge abadumile amazambane ubhiya yabo, FROMAGERIE des Basques nozobamba yokudlela LE KWICK KWICK, BOUCHERIE MAILLOUX yesidlo ezinhle lelungiselelwe, Fishmongers ezimbili Ngakho LE VERSEAU 2 evulekile unyaka wonke futhi LES 3 ababhemayo kwasolwandle zabo zonyaka. I-Trois-Pistoles CHURCH ikufanele ukuchezukiswa, kanye ne-CANTINE D'AMOURS ukuze ungaphuthelwa ngama-poutine awo angaphuthelwa namabhega akhethekile. I-wharf, ulwandle kanye ne-Haunted House ye-Trois-Pistoles yomlando kuyakufanelekela. Iqembu le-baseball lezinga eliphezulu le-Trois-Pistoles linganikeza ithuba elihle kubalandeli besikhathi eside. Imizuzu engu-7 ngemoto ukusuka edolobheni iTrois-Pistoles, imizuzu engama-30 ukusuka eBic National Park kanye nemizuzu engama-50 ukusuka eRimouski ukuya enyakatho nemizuzu engama-45 ukusuka edolobhaneni laseKamouraska ukuya eningizimu.
Ukubona, ukwenza, hamba, ukunambitha, ukuhlola (imininingwane eyengeziwe): * sorry izixhumanisi ze-url azivunyelwe kulesi sigaba, kuzodingeka wenze ucwaningo ukuze ufinyelele izincomo.
Ngiphakamisa ukuthi ubhale izinto ongazibona phakathi kweKamouraska neRimouski.
I-Trois-Pistoles wharf lapho ungathatha khona isikebhe ukuya ogwini olusenyakatho ye-Les Escoumins. Ukusuka lapho, i-Tadoussac iseduze kakhulu, i-Saguenay Fjord, imikhomo, njll.
Ukusikisela: gcina indawo yakho ngaphambi kohambo uma ufuna ukuya.
Inkampani ekhiqiza utshwala encane iLe Caveau des Trois-Pistoles. Itholakala enhliziyweni yedolobha, eduze neBandla ukuze uvakashele futhi nendawo yokudlela yasendaweni enhle kakhulu: Le bistro du grenier.
I-Microbrewery du Caveau: ukuthola ku-facebook
I-Bistro du Grenier: ukuthola ku-facebook
Idolobhana seliphinde laba yinganekwane ngenxa yombhali nomqambi ongeyena u-Victor-Lévy Beaulieu. Thola mayelana nalo mbhali futhi ukufunde.
Ukuhlala e-Trois-Pistoles ngaphandle kokunambitha i-poutine yabo noma i-cheezburger ekhethekile (enamazambane athosiwe ku-burger!): Imenyu ku-Facebook.
Umthengisi wezinhlanzi we-Aquarius Near Trois-Pistoles, ngaphandle kwalokho umthengisi wezinhlanzi wezindawo zokubhema ezi-3 ezibheke esiqhingini esiluhlaza. Kuyamangalisa
Indlu yaseTrois-Pistoles kanye nomlando wayo izotholakala ngaphandle kokwesaba.
Kubalandeli be-baseball, i-Trois-Pistoles ineqembu eliphezulu, elihamba phambili kwiligi. Landela ukufana kwabo ku-Facebook
Kamouraska (imizuzu engu-40 eningizimu ye-Trois-Pistoles) uzothola izitolo ezimbalwa ezithakazelisayo lapho, ikakhulukazi indawo yokudlela yase-Côté Est kanye nomthengisi wezinhlanzi obhekene nayo. Bheka i-Facebook.
Uma uhlala ku-132 ubheke e-Trois-Pistoles esikhundleni sokuqhubeka ku-Autoroute 20, ungama e-Tête d'Allumettes micro-brasserie. Imikhiqizo emihle kakhulu.
Itholakala imizuzu engu-30 enyakatho ye-Trois-Pistoles, i-Bic National Park inikeza ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo, nezindawo ezinhle zomhlaba.
I-Rimouski (imizuzu engama-50 enyakatho yeTrois-Pistoles)
I-Rivières-du-loup (imizuzu engu-30 eningizimu ye-Trois-Pistoles)
amadolobha amabili amakhulu e-Bas-St-Laurent.
Futhi ngaphambi nje kwe-chalet, ukubuka kolwandle, uzobona i-Basque Island. Kuleli hlobo ivaliwe ngenxa ye-covid, kodwa ngenhlanhla izophinde ivulwe ngonyaka ozayo ukuze ivakashelwe.
Ungangabazi uma uneminye imibuzo
Ngaso sonke isikhathi ngemibuzo ye-Airbnb ngokuqondile, impendulo ivame ukunikezwa phakathi nehora elilandelayo.
Inombolo yepholisi: 302783
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$389.
Hlola ezinye izinketho ezise- Rivière-Trois-Pistoles namaphethelo